DAT Prep Courses Archives - Burburin DAT The
January 1, 2021 /in Koorsooyinka DAT Prep /by Kip Nielsen
Shirkada Gold Standard ayaa magac weyn in industry MCAT muddo ka badan toban sano, laakiin waa ku cusub in industry ee udiyaarin DAT. Inkasta oo ay ku cusub kulanka DAT ah, waayo aragnimo la wareejinta MCAT ka badan dunida ilkaha. Koorsadooda Gold Standard DAT dib u eegis, kaas oo la sii daayay 2013, isticmaalaa hab multimedia ku lug buugaagta, videos, iyo MP3 dib u eegis qaabaysan si ardayda loo siiyo dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan wax kasta oo ay u baahan yihiin inay ku ogaadaan…
Dildilaaca DAT ayaa calaamaddooda ku soo saaray warshadaha udiyaar garowga DAT oo ay la socdaan waxyaabaha ugu sarreeya ee dib u eegista ee Imtixaanka Awoodda Aragtida ah. Boqolaal ardayda pre-ilkaha ayaa guul aad u weyn marka aad isticmaalayso software this for qaybtan DAT ah.
Koorsada dib-u-eegista TopScore Pro DAT waxay soo jirtay ilaa tan 1998 oo ay sameeyaan shaqo wanaagsan at had iyo goor la xariirta iyo horumarinta ay software sanadihii la soo dhaafay. Waxay suuqa maanta mid ka mid ah waxyaabaha software jilidda imtixaanka ugu caansan.
CliffsNotes waa taxane ah oo ku Hanuuniyaa waxbarasho ee ardayda diyaarinaya imtixaanka Biology AP. Macluumaadka la soo bandhigay qaab buug yar oo si cad oo qeexan. Hanuuniyaa waxbarasho Kuwan waxaa loogu tala galay in aan bedelo ilo dib u eegis dhamaystiran sida, buugaagta ama buug. Waxay u adeegaan Hanuuniyaa tixraac sida deg deg ah dib u eegida wax.
buugga Test Admission Ilkaha The Barron ayaa waxaa qoray dhawr ilkaha oo markii ugu horaysay dib u sii daayay 1999. Ka dib markii ay sii daayo waxa ay mid ka mid ah buugaagta dib u eegis dheeraad ah oo caan ah oo DAT noqday. Arday badan ayaa laga helay in ay ku caawin ee sharxaya fikradaha muhiimka ah iyo waxa helay amaan badan, waayo, wax ay dib u eegis PAT.